कान्ति बाल अस्पतालमा चरम लापरबाही- बालबालिकाको खोप नै छैन ! — Motivatenews.Com
कान्ति बाल अस्पतालमा चरम लापरबाही- बालबालिकाको खोप नै छैन !
बैशाख २० काठमाडौं-अस्पतालको खोप शाखा पुग्दा सेवाग्राही सप्तरीका नरेन्द्रनारायण शाह र सो शाखामा कार्यरत नीरु पालीबीच भनसुन भइरहेको थियो । नरेन्द्रनारायणका आठ वर्षीय छोरा पृथ्वीईश्वरलाई हेपाटाइटिस ‘ए’विरुद्धको (एमएमआर) खोप लगाउनुपर्ने थियो ।
तर, नीरुले भनिन्, ‘१५ महिनासम्मका बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने खोप मात्रै हुन्छ । त्यसकारण, तपाईं अन्यत्र जानुस् । सरकारले नै हामीलाई बाँधेको छ । त्यहीअनुसारको खोप आउँछ ।’ नरेन्द्रनारायणले आफूलाई कान्ति बाल अस्पतालले निजी क्लिनिकमा रेफर गरेको बताए । उनले भने, ‘मेरो छोरो पनि त बालक हो । के गर्नु बाल अस्पतालले बालबालिकालाई नै वास्ता गर्दैन ।’
अस्पतालहरु बिरामीमैत्री हुनुपर्छ भनिए पनि नारामा मात्र सीमित भएको पाइएको छ । सेवाग्राहीलाई अस्पतालले अभद्र व्यवहार गर्दा पनि उनीहरु तै चुप मै चुप भएर बस्न बाध्य छन् । अस्पताल प्रशासन आफैंले केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा अझै स्तरोन्नति हुन नसकेको स्वीकार गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
रोटा भाइरसविरुद्धको खोप अहिले कान्तिमा छैन । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बढी सताउने यो भाइरसविरुद्धको खोप सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए पनि अहिले अभाव खड्किएको छ ।
चिकित्सक आइसकेपछि चिकित्सकहरुको कार्यकक्षभित्र बिरामी बोलाउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरुले बिरामीलाई थर्काउने गरेका छन् । रिपोर्टर कोठा नम्बर ४(ख) मा पुग्दा ती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अपशब्द समेत प्रयोग गरेका थिए । ती कर्मचारीले भनिन्, ‘मेरो टाउको दुखिसक्यो । कति कराएको, बोल्न सकेको । सबै जना बाहिर जानुस् त ।’ बिरामीका आफन्तहरु अस्पताल पुग्दा अलमिलिने गरेको देख्न सकिन्छ ।
अस्पतालमा रहेको सीटी स्क्यान मेसिन र डीआर मेसिन पटक–पटक बिग्रने गरेकोले मासिक २ हजार २ सय बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने गरेको छ । कान्ति बाल अस्पतालले ४ करोड ५४ लाख मूल्यको सीटी स्क्यान मेसिन र जापान सरकारबाट प्राप्त डीआर मेसिन पटक–पटक बिग्रने गरेका कारण बिरामी रेफर हुने गरेको महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ ।
हाल अस्पतालमा २ सय ९८ बेड छन् । दैनिक ६–७ सय बिरामी आउने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेशनरसिंह केसीले बताए । सरकारी चिकित्सक दरबन्दीको संख्या ७९ जना रहे पनि हाल ४८ जना चिकित्सक कार्यरत रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । हाल अस्पतालमा १३ वार्ड छन् । तर, ३६ मेडिकल अधिकृत, एक रेडियोलोजिस्ट, एक प्याथोलोजिस्ट, एक अर्थोपेडिक, एक ईएनटी (नाक, कान, घाँटी) सर्जन, एक डेन्टलको पद पूर्ति हुन सकेको छैन ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘बिरामीको चाप धेरै छ । तर, दरबन्दी कम छ । अस्पतालमा कतिपय सवालमा बिरामीमैत्री व्यवहार भएन होला । हामी बैठक बसेर सच्चिएर अघि बढ्छौं ।’